Bogga ugu weyn » blog » Sida loo Xakameeyo Rabitaankaaga Sonkorta iyo Ka-hortagista Leptin Resistance
Shakhsiyaad aan tiro lahayn oo adduunka ah ayaa u adkaysta leptin, inbadanna xitaa ma oga. Qorshaha guud ee cuntada casriga ahi waa qodob muhiim ah. Cunista sonkor badan, miraha, iyo cuntooyinka warshadaysan ayaa kiciya unugyadaada dufanka badan si ay jidhkaaga ugu daadiyaan leptin. Samee sida caadiga ah ku filan, jidhkuna wuu la qabsadaa adoo u adkaysta leptin.
Nidaamkani wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah sida dadku ugu adkaystaan ​​insulin. Waxay kaa dhigeysaa inaad dareento jirro, daal, iyo gaajo waqtiga oo dhan - xitaa markaad wax cunayso sida jidhkaagu u baahan yahay. Haddii aad leedahay hammuun cunno marwalba oo aad si joogto ah u raadiso cunto fudud oo kugu soo jiidan kara ilaa waqtiga cuntada, markaa waxaa suurtagal ah inaad leptin adkaysi u leedahay.
Rabitaanka cuntada ee xakamaynta ka baxsan (gaar ahaan ujeedoyinka cunnada aan caafimaadka qabin) ayaa adkaada astaamaha u adkaysiga leptin. Waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo inaad cuntooyinkaaga banaanka u dhigto si ay ugu yaraan afar saacadood u dhexeeyaan, oo ha u oggolaan inaad wax uun cunto. Haddii tani kugu adag tahay, waxaa jira fursad weyn oo aad adkaysi u leedahay leptin. Hurdo la'aanta iyo cunid la'aanta ku filan waxay noqon kartaa eedeyn sidoo kale diidmada leptin.
Haddii aad cuntid oo aad isku dayeyso inaad miisaanka si dhakhso leh u yareyso, tani waxay ku xirnaan kartaa caabbintaada leptin si aad u weyn. Waa wax aad u jilicsan in si weyn loo jaro kaloriintaada markaad isku dayeyso inaad miisaanka yareyso. Si kastaba ha noqotee, wakhti kasta oo xaddidaadda kalooriga xad-dhaafka ah ayaa dib-u-dhac ku keeni kara, taas oo keeneysa in jirkaagu la qabsado adoo ku dhammaanaya inuu xitaa u adkaysto leptin. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah ka dib markii si lama filaan ah wax looga beddelo kalooriyada, jirkaaga uu sameeyo wax walba oo awoodiisa ah si uu u xajiyo baruurta la kaydiyay. Tani waxay ku dhacdaa dad badan oo shilal ah marka ay isku dayaan inay u beddelaan cunnooyinka caanka ah ee caanka ah ee 'Paleo'.
Isku darka diiqad sare iyo hurdo kugu filan oo kugu kordha heerarkaaga cortisol iyo hoormoonka. Cortisol badan waxay keentaa culeys badan iyo hurdo yar, taasoo horseedaysa wareeg xun oo ku dhammaada si isku mid ah waqti kasta: caafimaad xumo. Haddii aadan ficil ka qaadin inaad wax ka qabato culeyska fekerkaaga ama aad seexato ugu yaraan 7 ilaa siddeed saacadood habeen kasta, waxaad sameyneysaa naftaada caddaalad darro. Heerarka sare ee cortisol waxay sababaan leptin iska caabin, iyo marka aan la xakameynin, waxay sababi kartaa buurnaan, caabuq, iyo halista sii kordheysa ee cudurka wadnaha.
Haddii aad si fudud u isticmaashid sonkor aad u tiro badan hase yeeshe, markaa tani waxay ka mid noqon kartaa dhinacyada aasaasiga u ah caabbintaada leptin. Sonkorta waxay waxyeello u yeelan kartaa caafimaadkaaga habab badan. Waxaa jira wax fudud oo ku saabsan sonkorta oo na qabata oo mar labaad iyo mar labaad nagu soo noqnoqota. Haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba sonkorta ayaa si weyn noo haysa. Haddii aad tan akhrinaysid waxay u badan tahay inaad fahantay, oo aad khibrad u leedahay gacantada koowaad, soo jiidashadaan. Sonkorta uun maahan macmacaan ee waa qasab; Ma jiro wax la yiraahdo joojinta ka dib wax soo saarka sonkorta leh "mid fudud" ..
Waxaa naloo keenay sababo badan oo ku saabsan hamigeena sonkorta: wareegyada maskaxda ee raadsashada, cilladaha macdanta, dulinnada mindhicirka, nafaqo-xumada, qorshooyinka cuntada ee aan dheellitirka lahayn, habdhaqanka caadeysiga, cusbada badan, dhibaatooyinka shucuureed ee la aasay, hurdo la'aan, walaac stress iyo tan aan doorbidno, edeb la’aan. Khasaare nagama nihin sababaha keena qabatinka sonkorta, laakiin ogaanshaha kuma filna inuu na beddelo ama dhaqankeenna. Haddii ogaalku nagu filnaado kulligeen waxaan ku guuleysan doonnaa billadaha dahabka ah iyo xiddigaha dahabiga ah meel kasta oo nolosheena ka mid ah. Hadday wax jiraan, garashada oo keliya waxay ka dhigeysaa mid xitaa ka sii xun… si fiican ayaan u naqaannaa haddaba maxaanan uga sii fiicnayn? Isfahamku wuxuu ku dambeeyaa inuu yahay cunsur kale oo aan nafteenna ku xumeyno.
Tallaabada xigta ee fahamka waa in la isku dayo oo xal loo helo. Waxaan arrimaha ku qaadnaa gacmaheenna iyo dadaalkeenna si aan ugu leexanno beddelkeenna sonkor-jecel ka bilow ilaa iyo demin. Tani maahan nidaam aan xanuun lahayn, oo si fudud markaan dareemeyno inaan sameyneyno dhulka wax dhacaya ayaa nagu soo tuuraya waxaanan ku jirnaa himilo ah inaan ku dhufanno sonkor kasta oo aan ogaan karno oo aan ku soo laaban karno bilowga.
Markii aan dooranno inaan bartilmaameedsanno ku-tiirsanaanta sonkorta, waxaan weerareynaa sonkorta lafteeda, waxaan nadiifineynaa jikada, waxaan faaruqineynaa guriga dhammaan waxyaabaha oo waxaan ku dhawaaqeynaa sonkorta cadowga. Tanina waa hagaagsan tahay… mooyee ma shaqeynayso. Markii aan sameysano qorshe howleed sidan oo kale ah, waxaan nahay dhowr ficil oo aad iyo aad u fog oo aan kula macaamilayno tilmaamaha qaldan. Kamahadleyno waxa run ahaantii dhacaya.
Sirta: bartilmaameedka arrinta dhabta ah, ma aha saameynta ay arrintu leedahay. Damaca sonkorta ayaa ah saameynaha, waxay calaamad u yihiin dhibaatada dhabta ah, iyo daaweynta calaamadaha waligood kama dhigayaan arrin awood. Habka kaliya ee lagu horumarin karo runta, wax ka beddelka muddada dheer ah ayaa ah in wax laga qabto sababaha aasaasiga u ah goobahan sonkorta ee halista ah… haddii kale waxaad iska lumineysaa waqtigaaga oo waxaad naftaada u sii diyaarinaysaa mustaqbal kale oo sonkor ah.
Waa maxay sababta asalka ahi? Waa iska caabbinta leptin ee aan horay uga soo hadalnay. Hal dariiqo oo lagu xakameeyo damacyada sonkortaada iyo dib u celinta leptin iska caabinta waxay la jirtaa leptitox kaabis dabiici ah, taas oo ah isku darka 22 dhammaan maaddooyinka firfircoon ee dabiiciga ah ee jirkaaga wax ka qabta si looga hortago leptin iska caabinta iyo saameynta ay leedahay Marka leptin iska caabintu ku dhacdo jidhkeena waxaan leenahay nidaam cilladaysan. Burburkaani wuxuu soo saari doonaa astaamo dhibaato leh. Kaliya iska caabbinta leptinku ma waxay kordhisaa rabitaanka cuntada laakiin waxay soo saartaa jahwareer! Taasi waa habka loogu talagalay masiibada! Kaliya maahan inaad gaajoon doontid laakiin waxaad jeclaan doontaa noocyada ugu xun ee cuntooyinka suurtogalka ah possible
Waxaa laga yaabaa inaan ku eedeyno wax kasta oo kale qorraxda hoosteeda awood daridayada inaan joojinno gaarista buskudka soo socda… wax walba laakiin iska caabbinta leptin. Haddii aad rabto inaad aragto dhaqdhaqaaq dhab ah oo isbeddel ah waxaad u baahan doontaa inaad beegsato caabbinta leptin oo aad sameyso wax si aad "u hagaajiso".
22-ka maaddadood ee ku jira Leptitox waxay iska kaashadaan inay sameeyaan 3 shay: waxay ka caawiyaan jirka sunta, xakamaynta damaca iyo dhiirrigelinta miisaanka caafimaadka leh. Qiyaasta maalinlaha ah waa 2 kaniini oo la qaato hal mar maalintii, waxaana lagugula talinayaa inaad qaadato labadaas kaabsal 2-20 daqiiqo kahor intaadan wax cunin. Haddii aad ku cusub tahay qaadashada nafaqada, waxaan kugula talineynaa inaad dhigatid alaarmiga taleefankaaga si ay kaaga caawiso kugula talinta inaad qaadatid kahor cuntadaada.
Haddii aad ka warwareegto baaritaanka sheygan, Leptitox wuxuu isticmaalaa lacag dhan 60 maalmood oo lacag-celin ah sidaa darteed gabi ahaanba waxba kama lumineyso haddii dheeri-kani kuu shaqeyn waayo. Dalbo Leptitox maanta oo isku day naftaada.